Dobe Waya mwekota D2
FTTH dobe mwekota D2 mere maka nkwusioru ma ọ bụ erughị ala gburugburu ma ọ bụ ewepụghị FTTH eriri optic cablema ọ bụ dobe waya USB na FTTX owuwu ma ọ bụ ekwentị na dobe wires. FTTH mwekota D2 etinyere n'èzí na ụzọ gasị na obere jikọrọ abụọ abụọ ruo 50 mm.
FTTH dobe mwekota dị mfe maka echichi, na ọ dịghị achọ ọzọ ngwaọrụ, handily gbanwee metal S-nko na-enye ohere mfe echichi na cross-aka ma ọ bụ nkwusioru brackets na FTTH nko, dị ka mma.
FTTH plastic mwekota D2 nwere plastic clip maka gburugburu na ewepụghị cable nha n'obosara 2,5-5 mm ma ọ bụ nha 2 * 5 mm, nke na-ekpuchi ọtụtụ na-ewu ewu àmà nke n'èzí FTTH Gịnị. The plastic clip enye ndị magburu onwe igbaso na USB na amụma mkpuchi pụrụ ịdabere fixation.
Ewepụghị 2 * 5
Materials: UV eguzogide thermoplastic, metal S-nko.
Eriri Optic USB Suspension clamps na FTTH cable ngwa dị ma iche iche ma ọ bụ ọnụ dị ka nzukọ. Jera si FTTH plastic nkwusioru clamps a nwalere na kwupụtara iji mezuo ihe ndị a chọrọ nke ndị ahịa anyị.
Anyị na-elekwasị anya na àgwà na-ezu nso nke FTTH cable clamps na dị iche iche na dobe cable Mgbakwụnye. Welcome ịkpọtụrụ anyị
FTTH dobe mwekotaD2 high quality, ala price. D2 mwekota maka nkwusioru ma ọ bụ erughị ala gburugburu ma ọ bụ ewepụghị FTTH eriri optic cable.
Previous: Suspension mwekota D8
Osote: Service mwekota STB
Idebe waya mwekota D2
Eriri Optic USB Suspension clamps
FTTH cable mwekota
FTTH dobe mwekota
FTTH plastic mwekota
FTTH Fiber dobe mwekota ODWAC-hy
Dobe waya mwekota ODWAC-26
FTTH dobe USB nko, YK-02